सकारात्मक चिन्तन नै जीवन सुन्दर बनाउने उपाय हो !! | सुदुरपश्चिम खबर
देवराज उपाध्याय (पुरुष ) – जीवनबारे हरेक व्यक्तिका आ–आफ्नै धारणा रहेका हुन्छन् । यही नै हो भनेर ब्याख्या गर्न गाह्रो छ । तर यो चाहिँ सत्य हो कि जीवन साच्चै अमुल्य छ । यस धर्तिको सर्वोत्कृष्ट र सर्व शक्तिशाली प्राणी हो ‘मानव जीवन’ । श्रृष्टिको यस ‘चमत्कारीक रचना’लाई जसले ‘सुन्दर उपहार’का रुपमा ग्रहण गरेको हुन्छ उसले सोही अनुशार चलायमान रही सुकर्म मार्फत ‘सुनमा सुगन्ध’ थपिरहेको हुन्छ । अर्थात जीवनलाई ‘सार्थक’ बनाएको हुन्छ ।
जीवन अमूल्य छ । हामी मान्छेका रूपमा जन्मिनु नै अमूल्य हो । यसको केहीसँग पनि तुलना हुन सक्दैन । जीवनमा गुमाउनुपर्ने कुरा छैन, पाउने मात्रै छ । यो पाइनँ, यो गुमाए । यो हुन सकेन । ती सबै आशा र निराशा मात्रै हुन् । जीवन आफूभित्रै छ । म छु त सबै छ । म छैन त सबै छैन । गीतामा उल्लेखै छ नि ।
अहम् ब्रह्मास्मी सोहम् ब्रह्मास्मी । जीवन भनेको अनुभवको संगालो हो । हुन त यसबारे व्यक्तिपिच्छेको बुझाई फरक हुन्छ नै । जन्म र मृत्युको बीचमा गरिने कर्म नै जीवन हो । अर्थात् जीवन्तता नै जीवन हो । त्यो जीवन्तता कर्मसँगै लक्ष्य र उद्देश्यमा पनि हुनुपर्छ ! धन दौलत तथा गाडी घोडा, यी यावत् कुराहरुको वरिपरि मान्छे रुमल्लिरहेका देखिन्छन् यि सबै कुराहरु यहाँलाई के लाग्छन् ? त्यो भौतिक बिलासिता हो ।
कोही केही नहुँदा पनि सन्तुष्ट छन् वा कोही पर्याप्त भएर पनि असन्तुष्ट छन् । भएर पनि सन्तुष्ट नहुने बिलासितालाई निड बेस भन्दा पनि ग्रिड बेस आवश्यकता भनिन्छ । लोभमा आधारित उत्प्रेरणा वा लोभमा आधारित जिन्दगी कहिल्यै खुसी हुँदैन । म भित्र पनि म छ भन्ने आत्म सन्तुष्टिको बोध हुनुपर्छ । त्यसकारण मलाई त जिन्दगीमा गुमाएको केही पनि लाग्दैन ।
मैले पाएँ भन्दा पनि गुमाएको छैन भन्दा उपयुक्त होला । कसैले पनि सम्पूर्ण प्राप्ती गर्न सक्दैन । मेरो सन्दर्भमा म सँग जे छ त्यसमा म खुशी छु । जीबन नियमित प्रक्रिया हो । जो कर्ममा नियमित लाग्छ, त्यसले केही न केही त प्राप्त गरिहाल्छ । प्राप्ति भनेको हिजोको कर्मको परिणाम पनि हो । हिजो भनेको विगतको जिन्दगी होइन की, जुन हामीले कर्म गरेका थियौं त्यसको प्रतिफल हो भन्न खोजेको हो ।
आज हामीले केही काम गरेनौं भने भोली त्यसको प्रतिफल त त्यस्तै आउने हो नि त, हैन र ? भोली राम्रोको अपेक्षा राखिन्छ भने आज त्यही अनुशार राम्रो काम गर्न जरुरी हुन्छ । त्यसैले अनुशासित र कर्मयोगी जीवनको प्रतिफल हो, प्राप्ति । तर, प्राप्ति नै सबैथोक होइन । चाहे सचिव हुन् वा मन्त्री । आज हुन्छन् । भोलि हुँदैनन् । त्यो त्यसैले क्षणिक आनन्द दिन्छ । तर, जीवन र यसको मर्म बुझेर दायित्व अनुसरण गर्दा प्राप्त हुने आनन्द नै दीर्घकालिन प्राप्ती हो । जीवनलाई वाल्यावस्था, युवा, वयस्क र वृद्धा अवस्थामा वर्गीकरण गरेको छ । वर्तमान सुन्दर बनाउने दुइटा विधि छन् ।
पहिलो मान्छेले सकरात्मक चिन्तन गर्नुपर्यो की मेरो जीन्दगी मेरो हातमा छ । जसरी ड्राइभरको हातमा स्टेरिङ हुन्छ, त्यसैगरी मेरो जिन्दगी मेरो हातमा छ भनेर उसले महसुस गर्नुपर्यो । जव उसले महसुस गर्छ तव के नराम्रो के सुन्दर भन्ने कुरा थाहा हुन्छ र सुन्दर बनाउन लाग्छ । अनि त्यो सुन्दर हुन्छ ।